Xayawaanka Isku Dheelitirka CBD • Dawooyinka Inc.eu
Cannabidiol of CBD waa meel walba maalmahan. Waxay sidoo kale si wanaagsan ugu taagan tahay boqortooyada xayawaanka. Eeyaha, bisadaha, xayawaannada kale iyo fardo waxay mararka qaar ka faa'iideysan doonaan. Laakiin waa sidee?
Jidh wanaagsan oo caafimaad qaba ayaa isku dheellitiran. Vertebrates, iyo sidoo kale bini'aadamka, tan waxaa inta badan lagu xakameeyaa nidaamka endocannabinoid. Cannabidiol, mid ka mid ah waxyaabaha aan cilmi nafsiga ahayn ee xashiishadda, ayaa saameyn ku leh tan.
1 Maalinta dheelitirka
Dabcan, isku dheelitirnaantaani waxay ka bilaabmaysaa cunto wanaagsan, caafimaad leh, noocyo kala duwan leh iyo jimicsi fara badan. Tani waxay u wanaagsan tahay caafimaadkaaga nafsadeed. Sabab la aan maahan inay badanaa isku dayaan inay dadka niyadjabsan dhaqaajiyaan, macno ahaan iyo macno ahaanba. Laakiin maxaa ka dambeeya. Nidaamka 'endocannabinoid' wuxuu nidaamiyaa dhammaan hababka isku-dhafan ee jirka. Tusaale ahaan, waxay saameysaa nidaamka neerfaha, nidaamka caloosha sidaas darteedna waxay muhiim u tahay isu dheelitirka jirka iyo maskaxda. Tani waxay khusaysaa dadka iyo xayawaanka labadaba.
Welwel, walaac, xiisad, ama fayras, nafaqada qaldan ayaa carqaladeynaysa jirka, waxay ku keentaa dadka iyo xayawaanku inay bukoodaan, la kulmaan cabsi, ama la kulmaan cilado kale oo maskaxda ah. Taasi waa meesha CBD ay ka ciyaarto ciyaarta.
Cannabidiol waa cannabinoid aan cilmi-nafsi ahayn oo laga helo xashiishka. Jidhkuna isaguba iskiis buu sameeyaa cannabinoids laakiin dabcan waxaad sidoo kale ku dari kartaa cunto ama kaabis. Sidan ayaad u dardar galin kartaa howsha soo kabashada, si jirku laftiisu sifiican u shaqeeyo. Taasi waa sababta CBD ay ugu caan baxday cilado badan, cabashooyin nafsi iyo jir ahaaneed.
Faa'iidooyinka iyo daaweynta cabashooyinka caafimaad
Faa'iidooyinka qaarkood oo loo nisbeeyo cannabidiol:
adkaysiga oo kordhay
xirmooyinka caafimaadka qaba, maqaarka, dhogorta
Taasi waa sababta aad ugu adeegsan karto cbd kaabis ahaan, iyo waxyaabo kale:
walwal joogto ah ama xanuun
dhibaatooyinka dheef-shiid kiimikaadka;
Dabcan waxaa jira caddayn anecdotal ah oo ku filan in badeecada CBD ay saameyn togan ku leedahay xayawaan. Laakiin weli waxaa jira daraasado aad u yar oo la heli karo oo si cad loo sheegi karo inay caawin doonaan. Sidaa darteed waxaa ugu wanaagsan inaad kala hadasho takhtarkaaga xoolaha wixii ku saabsan dhibaatooyinka gaarka ah ee xayawaankaaga rabaayada ah iyo inaad dhegeysato talooyinka vet-kaaga.
Akhri wax dheeraad ah huffpost.com en dehoefslag.nl.
Narcos Mexico xilli 3 on Netflix deyrtan
Xilliga 3 ee taxanaha daroogada ee la garaacay Narcos Mexico ayaa ugu dambayntii ku jira hawsha bilawga. 5…
Sidee cannabis loogu caawin karaa miisaan lumis?
In kasta oo marijuana aysan xallin karin dhammaan dhibaatooyinka nolosha, waxay kaa caawin kartaa inaad ka gudubto ...
Amazon waxay ka saareysaa shuruudaha baaritaanka xashiishadda codsadayaasha shaqo
Sigaar cabayaasha sigaarka ayaa u heelan inay ka shaqeeyaan Amazon doorka la xiriira gaadiidka aan lahayn transport